Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo Shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Fidriga – Kalfadhi
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed, oo wareysi gaar ah siiyay Kalfadhi ayaa Shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay dabaal dagga maalintii 2aad ee munaasabadda Ciidul Fidriga.
Sheekh Cusmaan Barre Maxamed ayaa sheegay in Shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan gobalo kala duwan iyo dibadda ay si wayn u dabaal dageen Shalay iyo Maanta islamarkaana mashquul badan laga dareemayo goobaha ay bulshada isugu timaado, taasna ay muujineyso amni iyo daganaan dalka ka jirta.
“Hambalyo Hambalyo dhamaan muslimiinta, gaar ahaan Shacabka Soomaaliyeed waxaana la qeyb-sanayaa dabaal dagga munaasabadda Ciidul Fidriga oo maalintii 2aad si nabad ah loo maa-musayo” ayuu yiri Sheekh Cusmaan Barre oo wareysi siiyay Kalfadhi.
Sheekh Cusmaan Barre Maxamed Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ugu baaqay Shacabka ku nool degaanada maamulka Hirshabeelle in ay caawiyaan dadka danyarta ah ee ku nool degaanada Hirshabeelle kuwaas oo inbadan oo kamid ah maalintii 2aad aysan u dabaal dageyn Munaasabadda Ciidul Fidriga.
“Shacabka Hirshabeelle gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee wax heesta kana soo jeeda Hirshabeelle in ay ka qeyb qaataan Ciidsiinta dadka danyarta ah ee ku nool Hirshabeelle” ayuu yiri Sheekh Cusmaan Barre oo wareysi siiyay Kalfadhi.
“Carruurta agoonta ah iyo kuwa danyarta ah waxaan ku baaqayaa in laga Faxriyo oo laga Ciidsiiyo” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed.
Gobalada Soomaaliya ayaa maalintii 2aad waxaa si wayn looga dabaal dagaya Munaasabadda Ciidul Fidriga iyadoo mashquul badan laga dareemayo goobaha dalxiiska, hoteelada iyo garoomada kubadda Cagta.
Madaxweynaha Jubbaland “In maamul gobaleed kasta Albaabkiisa xirto danta ayaa ku jirto"